UN: 2,000 oo qof oo lagu dilay Soomaaliya laba sanno gudahood | Raadgoob
Hay’adda ayaa diiwaan gelisay in ka badan 2,000 oo qof in lagu dilay Soomaaliya muddadii u dhexeysay Janaayo 2016 illaa Oktobar 2017. Sidoo kale illaa 2500 oo kale ayaa ku dhaawacantay Soomaaliya isla xilligaasi.
Baaritaanka Qaramada Midoobey ayaa lagu sheegay in rabshadaha Al-Shabaab ay sabab u yihiin geerida ugu badan ee shacabka. Sidoo kale waxay dhalleeceysay ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika.
Dhibaatada ugu badan ee ka dhalata amni darada Soomaaliya waxay saameynta ugu daran ku yeelatay shacabka, gaar ahaan marka ay ciidamada dowladda iyo kuwa caawinaya ay dagaal la galaan kooxda Al-Shabaab.
Ururka Al-Shabaab waxaa lagu eedeeyay in uu sabab u yahay dhimashada ugu badan, sida weerarkii Muqdisho ka dhacay bishii Oktobar oo ay ku dhinteen in ka badan 300 oo qof oo shacab ahaa.
Qaramada Midoobey ayaa arrimahan oo dhan uga hadashay warbixin lixdan bog ka kooban oo lagu sharaxay sida ay kor uga sii keceyso tirada shacabka ee lagu dilay gobolka Banadir.
Sidoo kale waxay UN sheegtay in saldhigyada militari ee laga sameynayo goobaha shacabka ay ku badan yihiin in ay halis gelinayaan nolosha dadka rayidka ah, maadaama ciidamada ay bartilmaameed u yihiin weerarada Al-Shabaab.
Warbiinta Qaramada Midoobey ayaa lagu eedeeyay laamaha amniga in ay si aan kala sooc lahayn dad u xirxiraan iyo in ay la shaqeeyaan miliishiyaad lala xiriirinayo qabaa’il, “oo xaaladda sii cakiri kara”.
Dhinacyada ku hardamaya Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay in ay caruurta ka dhigtaan ciidamo, taas oo xad gudub ku ah shuruucda caalamiga ah.